Efa miseholany ireo zavatra voalazan’ny bokin’ny Apokalipsy toy ny tondra-drano, ny areti-mandringana….Efa nambarako tamin’ny fiandohan’ny volana janoary teo daholo ireo rehetra ireo ary mbola ampiko fa hisy mpanao politika tranainy sy vaovao ho faty amin’ity taona 2020 ity raha hisy filoham-pirenena hiongana amin’ny toerany ihany koa. Nohamafisiny fa efa nambaran’Andriamanitra taminy mialoha ihany koa ny fisiana mpanao baolina malaza hamoy ny ainy ary iny vao tanteraka tamin’ny faran’ny herinandro teo iny izany. Mikasika ny Coronavirus manokana dia nomarihin’ny pastera Mailhol fa tsy afa-miala amin’io aretina io isika eto Madagasikara noho ny fisian’ireo teratany Sinoa marobe mivezivezy sy monina eto amintsika. Na izany aza anefa dia notsindriany fa amin’ny alalan’ny vavaka ihany no hahafahana miaro ny vahoaka Malagasy. Manana andraikitra goavana amin’izany ireo raiamandreny am-panahy amin’ny alalan’ny vavaka hataon’ny isam-piangonana. Miantso ny rehetra mba hivavaka sy hiankohoka amin’Andriamanitra araka izany pastera Mailhol hahafahana mampihena ireo loza voajanahary mety hitranga eto amintsika.